Mirongatra ny halatra taova any Atsimo : nalàna ny mason’ilay tovolahikely 14 taona | NewsMada
Mirongatra ny halatra taova any Atsimo : nalàna ny mason’ilay tovolahikely 14 taona
Tena misy ny halatra taova any Atsimon’ny Nosy any. Manamarina izany ny nanjo ity tovolahikely iray vao 14 taona, tao Belavenoke, Toliara II ity. Nalan’ireo tsimatahotody ny voamasony.
Tovolahikely iray 14 taona no niharan’ny fangalarana taova ka ny masony no nalain’ireo olon-dratsy tao amin’ny fokontany Belanevoka, kaominina Milenaka, distrikan’i Toliara II, afakomaly tamin’ny 10 ora maraina. Araka ny fampitam-baovao avy any an-toerana, noloaran’olon-tsy fantatra ny masony roa ka efa lasan’izy ireo ny voamasony iray raha mbola tratra niraviravy teo amin’ny toerany kosa ny ilany. Niandry tanimboly misy mangahazo ity tovolahikely niharam-boina ity no nisy naka an-keriny ka nentin’ireo mpaka an-keriny ary tamin’izany nalan’izy ireo ny masony. Lasa ny masony havia ary saika haka ny masony havanana ireo mpangalatra taova, saingy nisy nahita tampoka ka lasa nitsoaka tany anaty ala izy ireo. Olona iray natsaka no nahita ireo nahavanon-doza ka nanaitra avy hatrany ny fokonolona teo an-tanàna. Raikitra ny kiririoka sy antso vonjy (hazolava) raha nahita ilay tovolahikely efa torana tsy mahetsika sady mihosin-dra. Nizara roa ny fokonolona, tao ireo nanenjika niaraka tamin’ny Dinabe ireo mpangalatra taova, nisy kosa ireo nitondra haingana ilay tovolahikely namonjy hopitaly.
Mahoraka ao Toliara II ny fitadiavana anakandriamaso…
Hatramin’ny omaly, tsy mbola fantatra ny fitohizan’ity raharaha halatra taova ity. Nanao izay ho afany tamin’ny famerenana ny masony ilany niraviravy tsy lasan’ireo mpangalatra ny mpitsabo. Araka ny fanazavan’ny mpitsabo ao amin’ny hopitalin’i Toliara, simba tanteraka ilay masony tsy azon’ireo mpangalatra. Avotra ihany ilay tovolahikely taorian’ny fitsaboana azy ka afaka nitantara ny zava-nanjo azy. Voalazan’ny loharanom-baovao avy any an-toerana fa isan’ny mampirongatra ny halatra taova ny resaka mandeha fa misy mitady anakandriamaso amin’iny faritra iny. Mampirongatra rahateo koa ny vaky fasana any an-toerana sy ny halatra taova. Ankoatra ireo jiolahy mpangalatra taolam-paty, misy kosa ireo mangalatra ny voamason’ireo razana ao am-pasana. Hatramin’izao, tsy mbola tratra ireo nahavanon-doza tamin’ity halatra taova feno habibiana ity. Mandray an-tanana ity raharaha ity ny mpitandro filaminana ao Toliara.
Tsiahivina fa efa nisy trangana halatra taova toy izao koa tao Ambahikily, distrikan’i Morombe, ny volana novambra 2017 lasa teo. Ankizilahikely iray mpiandry ondry no tsy hita tao anatin’ny andro maromaro. Ny fatiny sisa hitan’ny olona ka tsy teo intsony ny lelany sy ny masony. Voalaza fa olona efa za-draharaha ny tompon’antoka tamin’izany.
Tao amin’ny distrikan’i Morombe ihany, lehilahy iray marary saina tezaina ao amin’ny ivontoeram-pitaizana olona tsy salama saina koa no nisy nangalatra ny taovany. 3 km miala ity ivontoeram-pitaizana ity ny nahitana ny fatiny ka ny lohany sisa hita tamin’io fotoana io. Olona efatra no indray voasambotra ahina ho tompon’antoka tamin’ity raharaha ity.
Mirongatra indray ny halatra taovan’olona. Atao inona sa fanakorontanana tsotra izao? Ahina ho very anjavony toy ny raharaha halatra taolam-paty koa ny momba itony halatra taova itony.
CMS sy Jean Claude